Fampandrosoana… mana(n)tona vahoaka | NewsMada
Efa hifarana izao ny ady mivantana amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 amin’izao? Na ahoana na ahoana, tsy misy toy ny mitandrina ihany. Heverina ho toy eny ho eny ihany ny tsimokaretina coronavirus. Fijerena lavitra amin’ny fiarovan-tena izany, fitandroana fahasalamana…
Inona ny ho fampandrosoana eo raha farofy sy tsy matoky tena amin’izay ataony ny tsirairay noho ny fanahiana aretina, ohatra? Mila miatrika ny fampandrosoana amin’izay izao. Mby aiza? Farafaharatsiny fihatsaran’izay ahazoana miatrika ny asa sy ny famokarana andavanandro ahay.
Maika sy lohalaharana hatrany ny fandriampahalemana. Tany tsy ilaozan’adala na olon-dratsy. Saingy misy faritra tena anjakazakan’ny asan-jiolahy. Lavitra fanjakana? Na mpitandro filaminana, na mila fahatokisana fitsarana… Misy ny ezaka, saingy be lavitra hatrany ny mila hatao.
Mba tsy hisy intsony ny tany lavitra fanjakana, na mitaraina tsy misy mihaino na mijery… Fanjakana manakaiky vahoaka, fampandrosoana manatona vahoaka… Hatramin’izao, mbola misy tsy mahafa-bela fa tavela ny tarazo ela teo aloha? Na fampandrosoana manantona fa tsy manatona vahoaka.
Tsy inona izay fampandrosoana manantona vahoaka izay fa mampikirazorazo azy miandry izay ataon’ny mpitondra noho ny tsy fandriampahalemana tsy ahafahany manoatra, ohatra, na tsy fampandraisana andraikitra amin’izay azony atao sy vitany, na tsy fakana ny heviny amin’izay mahasoa azy…
Mihantona ho azy koa ny hoe fampandrosoana amin’izany, tsy mety tafapaka any ifotony na manatona azy toy inona aza: tsy andraisany anjara, tsy mamparisika azy, mety tsy tsapany sy fantany aza… Hafa ny fampandrosoana manatona na manakaiky vahoaka: avy aminy, misy ataony, miantefa aminy.
Tsy nahitan-javatra amin’ny fifandraisana mivantana sy akaiky amin’ny vahoaka amin’izay mahazo azy sy ny hetahetany ve ny ady tamin’ny valanaretina covid-19 teo? Fandresana iray izay raha hay ampiasaina hiatrehana ny fampandrosoana, fa manana ny hasiny sy toerany amin’izany ny vahoaka ifotony.